Fahamehana ara-pahasalamana: Tsy nifanarahan’ireo lehiben’ny andrimpanjakana ny mbola hitohizany
dimanche, 09 août 2020 15:15
Nitarina 15 andro ny fahamehana ara-pahasalamana. Ny Didim-panjakana laharana faha-2020-890 tamin’ny 08 aogositra 2020 no mamaritra fa mipetraka eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara ny «Fahamehana ara-pahasalamana» manomboka ny 08 Aogositra 2020 ary mihatra avy hatrany.
Noraisina nandritra ny Filankevitry ny Minisitra io didim-panjakana io, taorian’ny fakan-kevitra natao tamin’ny Filohan’ny Antenimieram-pirenena, ny filohan’ny Antenimierandoholona ary ny Filohan’ny Fitsarana avo momba ny Lalàmpanorenana.
Hatraiza ny lanjan’io fakan-kevitra io ? Fantatra mantsy fa misy filohana andrimpanjakana, anisan’ireo nakan-kevitra no mangataka ny hampiatoana avy hatrany amin’izay io fahamehana ara-pahasalamana napetraka hatramin’ny marsa 2020 io.
Tao anatina taratasy nifanakalozana momba izany, tamin’ity faran’ny herinandro ity, no nilazany mahitsy fa ny mpitondra ihany no tsy manaja sy manosihosy ankitsirano ireo fepetra napetraka mba hiadiana amin’ity valanaretina coronavirus ity.
Efa tena sahirana loatra ny Vahoaka, hoy hatrany ilay filohana andrimpanjakana ka fepetra ara-pahasalamana mifanaraka amin’izany, an-tsitrapo ary tenierana no tokony raisina.